Nanao fihetsiketsehana manoloana ny Minisiteran’ny Tontolo Iainana sy ny Harena Voajanahary ao Azerbaijan ireo mpiaro ny tontolo iainana · Global Voices teny Malagasy
Ny Ecofront, FTMF mpandala tontolo iainana no nikarakara ny fihetsiketsehana.
Voadika ny 15 Jolay 2021 4:22 GMT
Pikantsary avy amin'ny lahatsarin'ny Ecofront https://www.facebook.com/1296601400388722/videos/353823426307406
Ity lahatsoratra ity dia navoaka voalohany tao amin'ny OC Media. Navoaka etoana ny lahatsoratra nasiam-panovana izay ao anatin'ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Nanao fihetsiketsehana nanoloana ny Minisiteran'ny tontolo iainana sy ny harena voajanahary ao Baku ny 6 Jolay ny vondronà mpiaro ny tontolo iainana iray. Notanisain'izy ireo fa ny fandringanana ala mitohy sy ny fifanarahana fampanofana maharitra, hatramin'ny 49 taona, ny tany misy ala amin'ireo mpihazona tsy miankina no anton'ny fihetsiketsehana.
Ny Ecofront, ONG miaro ny tontolo iainana Azerbaijani no nikarakara ny fihetsiketsehana.
Talohan'ny fihetsiketsehana dia nandefa ny lisitr'ireo fitakiana tao amin'ny Facebook ny Ecofront. Anisan'izany ny famaranana ny fifanarahana vao haingana niaraka tamin'ny orinasa Beta Tea izay mikasa ny hanadio ny ala mirefy 43 hektara hananganana toeram-pambolena dite, ny fampiatoana ny asa fandavahana rehetra momba ny tany izay fananan'ny Famatsiam-bolan'ny Ala Azerbaijan, ary ny fanokafana ny fifanarahana rehetra momba ny fampanofana tany avy amin'ny Famatsiam-bolan'ny Ala ho an'ny besinimaro.
Nandritra ny fihetsiketsehana, nanambara ireo mpikatroka mafàna fo fa mila mihaona amin'ny Minisitry ny tontolo iainana sy ny harena voajanahary Mukhtar Babayev izy ireo mba hampitana ny fitakiany rehetra. Na izany aza, nilaza tamin'izy ireo ny mpitondratenin'ny minisitera fa tsy azo natao ny fihaonana noho ny fepetra fiarovana amin'ny valan'aretina.
“Amin'ity hetsika ity dia milaza izahay fa: atsaharo ny fanapahana hazo sy ny fanimbana ny natiora,” hoy ny mpiara-manorina ny Ecofront Javid Gara tamin'ny fampitana mivantana nandritra ny fihetsiketsehana. “Raha tsy izany, loza voajanahary lehibe no miandry an'i Azerbaijan.” Nomeny tsiny manokana ihany koa ireo “mpanefoefo, tompon'andraikitra ary mpandraharaha” noho ny fandripahana ala misy amin'izao fotoana izao.
Ny fifanarahana fampanofana ala vao haingana no anisan'ny fandaharanasan'ny Agro Park ao Azerbaijan, naorina tamin'ny 16 Aprily 2014. Araka ny nolazain'ny Minisitry ny tontolo iainana sy ny Harena Voajanahary, zaridainam-pambolena miisa 50 mahery no haorina ao amin'ny firenena. Hatramin'izao fotoana dia 16 monja amin'ireo zaridainam-pambolena ireo ihany no natsangana raha toa ka tsy nisy antontan-taratasy mampahafantatra amin'ny fomba ofisialy ny fotona hanaovana an'ireo zaridaim-pambolena ireo.